Zazalahy io! Teraka tamin'ny sidina Lufthansa 543 avy tany Bogota nankany Frankfurt
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Zazalahy io! Teraka tamin'ny sidina Lufthansa 543 avy tany Bogota nankany Frankfurt
Vehivavy iray 38 taona avy any Bulgaria dia niteraka zazalahy tamin'ny sidina Lufthansa tamin'ny sidina LH543 Atlantika Lufthansa avy any Bogota ka hatrany Frankfurt dia tsy nandeha araka ny nandrasana ho an'ireo ekipa sy mpandeha tao anatiny.
Samy salama tsara ny reny sy ny zaza. Ny fotoana nahaterahana tamin'ny 12:37 dia mahazatra - ny toerana nahaterahana fa tsy: ny haavon'ny havoana Atlantika Avaratra dia 39,000 metatra tamin'io fotoana io (11,800 49 metatra teo ho eo) amin'ny latitude 21 degre Avaratra, ary XNUMX degre ny haavon'ny West.
Ny Airbus A340-300 niaraka tamin'ny fisoratana anarana D-AIFC (nantsoina hoe "Gander / Halifax") dia niainga avy tao an-drenivohitra Kolombiana Bogota tamin'ny 25 Jolay tamin'ny 21:00 ora teo an-toerana niaraka tamin'ny mpandeha 191 sy mpikambana ekipa 13 tao anatiny. Nandritra ny sidina dia nanomboka niaritra fanaintainana aloha loatra ilay vehivavy. Nafindran'ireo mpiasa tao amin'ny seza teo aloha ny mpandeha marobe, ary lasa efitrano fandefasana tsy misy hatak'andro ny tapany aoriana amin'ny fiaramanidina. Nikatona tamin'ny fàfana fiainana manokana ny faritra manontolo. Ny fahaterahana dia nitohy tsy nisy fahasarotana, nanampy ireo mpiasa ao amin'ny kabine sy dokotera telo izay sendra tao anaty sambo. Ny renim-pianakaviana vaovao Desislava K. dia nisaotra ny ekipa mpanampy ary nanonona ny zanany lahy Nikolai - anarana mitovy amin'ny iray amin'ireo dokotera.
Mba hametrahana ny renim-pianakaviana sy ny zanany amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana faran'izay haingana, dia nanapa-kevitra ny kapiteny ny hijanona ao Manchester, toerana nijanonan'izy ireo tamin'ny 13:09 ora teo an-toerana, ankehitriny miaraka amina mpandeha 192 tonga. Rehefa teo am-pelatanan'ny mpamonjy voina soa aman-tsara ny reny sy ny zaza dia niainga indray ny kapiteny nankany amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Ity sidina hafakely ity dia tonga tany Frankfurt tamin'ny 17:28 ora teo an-toerana.
“Mbola tsy nahita zavatra toy izany aho nandritra ny 37 taona niainako ho matihanina. Nanao asa miavaka ny ekipazy iray manontolo. Izany dia fiaraha-miasa lehibe, miaraka amin'ny tsirairay manao ny anjarany, "hoy i Kurt Mayer, kapitenin'ny sidina LH543. Rehefa avy niantsona aho dia tonga tany amin'ny reny sy ilay zaza vao teraka mba handray azy eto amin'izao tontolo izao. Ankoatry ny fahaterahan'ny zanako lahy dia io no fotoana nampihetsi-po indrindra tamin'ny fiainako ”, hoy i Mayer.
“Rehefa teraka ilay zaza dia nampahafantariko ny mpandeha hafa ny rafitry ny mpandeha. Nitehaka ireo mpandeha ary faly toy izany koa fa nandeha tsara ny zava-drehetra ”hoy i Carolin van Osch, Purser ny sidina. "Amin'ny anaran'ny ekipazy dia tiako ny misaotra ireo mpitsabo izay nanampy tamin'ny fanatanterahana izany, ary mirary ny soa ho an'ny fianakaviana izahay", hoy Ramatoa van Osch.
Mahalana vao teraka ny fahaterahana an-tsambo. Ity no fahaterahana fahiraika ambin'ny folo tamin'ny sidina Lufthansa nanomboka ny taona 1965. Ny mpiasan'ny kabinetra dia omena fiofanana momba ny fanampiana voalohany, izay misy ihany koa ny fepetra voalohany sy ny torolàlana momba ny fampiasana fitaovana ara-pitsaboana sy fitaovana ilaina amin'ny fahaterahana an-tsambo. Lufthansa dia nanoro hevitra ny vehivavy bevohoka hiresaka amin'ny mpitsabo aretim-behivavy momba ny sidina ho avy. Ny vehivavy bevohoka bevohoka tsy sarotra dia mety manidina miaraka amin'i Lufthansa hatramin'ny faran'ny herinandro faha-36 amin'ny fitondrana vohoka, saingy manomboka amin'ny herinandro faha-28 dia asaina mitondra taratasy fanamarinana ankehitriny avy amin'ny mpitsabo aretim-behivavy.
airberlin dia manolotra sidina mankany Canada
Banky Sunway Hotels & Resorts eny amin'ny tsena Japoney